Iindaba - iiteyiphu zealuminium ongazange uzisebenzise
Xa kuziwa kwi-aluminium tape foil, ndiyakholelwa ukuba sonke kufuneka siqhelane nayo, njengoko inokubonakala rhoqo kudidi lwezixhobo zekhaya.
Okokuqala, i-aluminium foil tape yenziwe nge-adhesive efanelekileyo yokuthintela uxinzelelo, kunye neempawu ze-aluminium foil ukumelana nobushushu obuphezulu, ukunganyanzeleki, ke inefuthe elihle kakhulu lokugquma, kodwa ikwanazo neepropathi ezibonakalayo, kubomi bethu, ii-oveni, imicrowave Iionti ziya kusetyenziswa kwi. Ewe kunjalo, kukho uninzi lwezicelo kwishishini leemoto.
Apha ngezantsi uzakufumana ezimbalwa zeemveliso eziphambili zefoyile yealuminium.
(A) Imigca eqhelekileyo / engacwangciswanga yefoyile yealuminium
Le mveliso iyimveliso eqhelekileyo kwimarike, i-viscosity enhle, i-insulation efanelekileyo, umsebenzi wokukhusela i-electromagnetic. Isetyenziselwa ikakhulu ukukhusela i-electromagnetic yeentlobo ezahlukeneyo zeemveliso ze-elektroniki, kunye nokugquma okufudumeleyo kwizixhobo zasekhaya nezorhwebo.
(B) Iteyiphu yefoyile yealuminiyam enye kunye namacala amabini ngokuqiniswa
Le mveliso yinto edibeneyo kunye neglasi yefayibha yokuqinisa ukuqiniswa phakathi kwefoyile ye-aluminium kunye nephepha lekraft, elinemisebenzi ye-aluminium tape foil, kodwa kunye nokungena kwamanzi, ubungqina bokubumba kunye nobushushu. Isetyenziselwa ukufakwa kwemibhobho, ukukhusela ngaphandle kwizixhobo zokufudumeza kunye nokupholisa, kunye nokugquma kobushushu kwezakhiwo neehotele.
(C) Iteyiphu yefoyile yeglasi yealuminiyam
Le mveliso yenziwe ngefoyile ye-aluminium kunye nelaphu leglasi yefayibha emva kokuncamathela, kunye nokusebenza okuhle kwesithintelo samanzi, ukusebenza ngokuchasene ne-oxidation, i-asidi ebuthathaka kunye nokumelana nealkali, ubungqina bokuqhushumba kunye nokudangatye kwelangatye. Isetyenziselwa ukutywina imibhobho kunye nolwakhiwo lweendlela ezibonakalayo kumgangatho wombane wokufudumeza umbane.
(D) Idangatye lefoyile ye-aluminium ebuyisa ilangatye
Classy nelangatye nekudodobalisa tape kunye ngefoyile ye-aluminiyam ecocekileyo njengoko izinto isiseko, iglu for nelangatye nekudodobalisa, kwaye ke ngokusebenza kakhulu iphepha abicah bodwa bodwa njenge liner edityanisiweyo. Ngamandla aphezulu e-peel, ukubambelela okuhle kwasekuqaleni, umanyano, iipropathi zodlamko oluhle kakhulu. Ilungele imibhobho yomoya, iindonga, kunye nentsimbi yokugquma, kunye nokufakwa kweemoto kunye noololiwe, ukuhambisa umbhobho wenqanawa, njl.
(E) iteyiphu yefoyile emnyama yealuminium
Ukuze abasebenzi kwindawo yokusebenza ende kwiliso lomntu abayi kuva ukudinwa, umphezulu usebenzisa ukutyabeka okumnyama. Inemisebenzi yokufakwa kukukhanya, ukufakwa kwesandi, ubungqina bomswakama, anti-corrosion, ukufudumeza ubushushu, ulondolozo lobushushu, ukudodobalisa idangatye, njl.njl ikakhulu kudlala indima yokhuseleko lokhuselo lwesandi kwiiholo zesidlo kunye neeholo zekonsathi.
(F) Iteyiphu yefilimu eyenziwe ngeAluminiyam
Le mveliso igqunywe ngethayile yefoyile yealuminium kwifilimu, ukufudumeza ubushushu, anti-corrosion, ukhuselo lwe-electromagnetic, iipropathi eziqinileyo zokuqina. Isetyenziselwa ukuhombisa ngaphakathi, ukushicilela umzi-mveliso kunye nezinye iindawo.